I-inboxAware: Ukufakwa kwe-inbhoks ye-imeyile, ukuhanjiswa kunye nokubeka esweni ukujonga | Martech Zone
NgoLwesithathu, Meyi 26, 2021 NgoLwesithathu, Meyi 26, 2021 Douglas Karr
Ukuhambisa i-imeyile kwibhokisi engenayo kuyaqhubeka nokuba yinkqubo ephazamisayo kumashishini asemthethweni njengoko abagaxekile beqhubeka nokuhlukumeza nokonakalisa ishishini. Ngenxa yokuba kulula kwaye kungabizi kakhulu ukuthumela i-imeyile, abagaxekile banokutsiba ngokulula ukusuka kwinkonzo ukuya kwinkonzo, okanye iskripthi sabo abasithumela ukusuka kwiseva ukuya kwiseva. Ababoneleli ngeenkonzo ze-Intanethi (Ii-ISP) baphoqelelwe ukuba baqinisekise abathumeli, bakhe udumo ekuthumeleni iidilesi ze-IP kunye nemimandla, kunye nokujonga kwinqanaba ngalinye le-imeyile ukuzama ukubamba abo banetyala.
Ngelishwa, ngobuninzi bolumkiso, amashishini ahlala ezifumana exhonyiwe kwii-algorithms kwaye ii-imeyile zawo zihanjiswa ngqo kwisihluzi se-junk. Xa uhanjiswa kwifolda ye-junk, i-imeyile yaziswa ngobuchwephesha kwaye; ngenxa yoko, iinkampani aziyihoyi into yokuba ababhalisile zange bawufumane umyalezo wabo. Ngelixa ukuhanjiswa kusetyenziselwa ukuba kubhekiswe ngqo kumgangatho womboneleli wakho weenkonzo ze-imeyile, ukuhanjiswa ngoku kuxhomekeke kuphela kwi-algorithms.
Nokuba uyayakha na eyakho inkonzo, kukwidilesi ye-IP ekwabelwana ngayo, okanye kwidilesi ye-IP ezinikeleyo… kubalulekile ukubeka esweni ukufakwa kwebhokisi yakho engenayo. Kwaye, ukuba kunokwenzeka ukuba ufudukele kumnikezeli wenkonzo omtsha kwaye ukufudumeza idilesi ye-IP, ukubeka esweni yinkqubo ebalulekileyo yokuqinisekisa ukuba imiyalezo yakho iyabonwa ngababhalisi bakho.
Ukuze ubeke esweni ngokufanelekileyo ukuba ngaba i-imeyile yabo bayenzile kwibhokisi engenayo endaweni yefolda ye-junk, kuya kufuneka uthumele uluhlu lwembewu lwababhalisi kwii-ISPs zonke. Oku kwenza ukuba abathengisi be-imeyile bakwazi ukubeka iliso kwibhokisi engenayo kwaye emva koko uxazulule imiba kwinqanaba lokungqinisisa, inqanaba lodumo, okanye inqanaba le-imeyile ukuchonga ukuba kutheni ii-imeyile zabo zinokuhanjiswa kwiifolda ze-junk.
I-InboxAware Platform yokuhambisa
I-InboxAware inazo zonke izinto eziphambili ezifunekayo ukubeka esweni ukufakwa kwebhokisi yakho ye-imeyile, igama kunye nokuhanjiswa ngokubanzi:
Ukubeka iliso kwi-imeyile Fumana uxolo lwengqondo ngezilumkiso ezizenzekelayo kunye nokubeka esweni umqobo. Misela umda wakho wokwamkela kwaye masikwazise xa kukho into ekhangeleka gwenxa.
Uvavanyo lweeMbewu -Imodeli emva kweendlela ezilungileyo ezisetyenziswa ziingcali nge-imeyile, ukubeka esweni kwibhokisi engenayo ye-InboxAware kwenza ukuba abathengisi be-imeyile babone kwaye boyise izihluzo zokungqinisisa kunye nemigibe yogaxekile enokumisa ii-imeyile zakho ngaphambi kokuba uthumele ukuthumela.
Ukuhanjiswa kweNgxelo -I-InboxAware ibonelela abasebenzisi ngombono ocacileyo kunye nemicroscopic kuyo yonke idatha yabo ye-imeyile, enokuhluzwa kunye nokusasazwa ngaphandle kokuthumela ngaphandle kwingxelo yokufunda kuphela.
I-InboxAware ikuvumela ukuba wenze ngokwezifiso ideshibhodi yakho ngokukhetha kwiiwijethi ezininzi zokunika ingxelo kwaye uzilungiselele ngokusebenza ngokutsala kunye nokwehla ngokulula. Ulungelelwaniso lwabo olubanzi lwamawijethi asebenzisanayo lujonga ukusebenza kwe-imeyile kwizalathi ezininzi.
Bhukisha i-InboxAware Demo
Ukubhengezwa: Sisebenzisa amakhonkco ethu okudibana kweli nqaku.
tags: ukuhanjiswaiqonga lonikezeloukuhanjiswa kwee-imeyileigama le-imeyileUlawulo lwegama le-imeyileukubeka iliso kwi-imeyileesweni inboxi-inboxwareuluhlu lwembewu